राष्ट्रिय राजनीतिका प्रभावशाली माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा यतिबेला वाम गठबन्धनका तर्फबाट दाङ क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार बनेका छन् । यसअघि २०६४ सालमा पनि यसै क्षेत्रबाट अत्यधिक मतका साथमा विजयी भएका महरा यसपालिको निर्वाचनमा पुनः दाङको क्षेत्र नम्बर २ मा आएका छन् । दाङ जिल्लाको विकासका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका महरासँग चुनावको तयारी र अन्य विषयमा नेपालीपत्रकाे लागि प्रेम राम्जा मगरले गरेकाे कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
निर्वाचनको दिन नजिक आएको छ कस्तो अवस्था छ ?
निर्वाचनको दिन नजिक आउँदै जाँदा हामी अत्यन्त उत्साहित भएका छौँ । यसपालि २ वटा कुराले जनतामा उत्साह भएको मैले पाएको छु । पहिलो कुरा त यतिबेला वाम गठवन्धनबाट हामी उमेदवार भएका छौँ । अर्को कुरा मुलुकले स्थिर सरकार पाउने भयो भनेर जनतामा खुशीयाली छाएको छ । जनताको उत्साहले हामीलाई निकै सजिलो भएको छ ।
दाङ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाटै उम्मेदवारी किन ?
दाङ जिल्लाको ऐतिहासिक महत्व रहेको छ । म पहिले पनि यसै क्षेत्रबाट अत्यधिक मतका साथमा निर्वाचित भएको थिएँ । त्यतिबेला हाम्रो पार्टी अध्यक्ष रोल्पाबाट उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । २०७० को निर्वाचनमा म रोल्पाबाट उम्मेदवार भएँ । दाङ र रोल्पाको गहिरो सम्बन्ध रहेको छ । यतिबेला दाङलाई प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी बनाउने कुरा छ । यस हिसाबले पनि दाङलाई केन्द्रमा राख्नु जरुरी छ ।
अर्को कुरा आगामी ५ वर्षमा दाङलाई समृद्ध बनाउन मेरो उम्मेदवारी हो । यसका धेरै पाटाहरु छन् । दाङले सिंगो पश्चिम नेपाललाई नेतृत्व गर्न सक्छ । अहिले पनि दाङ पुरानो राप्ती अञ्चलको केन्द्रविन्दु हो । दाङलाई ५, ६ र ७ नम्बर प्रदेशलाई लिड गर्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यसको निम्ति मैले आफ्नो उम्मेदवारीको लागि दाङलाई रोजेको छु ।
यो निर्वाचनमा तपाईँलाई मत दिनुपर्ने कारण के हो ?
यो निर्वाचन क्षेत्रमा अरु पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो हैसियत अनुसार प्रयास गर्नुहुने नै छ भन्ने मैले विश्वास गर्छु । मेरो लामो राजनीतिक इतिहास, मैले हिजो जनयुद्धको बेला होस् अथवा त्यस पछिको शान्तिवार्ता हुँदै संविधान निर्माणसम्म मैले खेलेको भूमिका नै मलाई मत दिनुपर्ने आधार हो भन्ने लाग्छ । अहिले मैले राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राम्रो पहककदमी लिन सक्छु । मलाई मतदाताहरूले फेरि मतदान गरेर दाङको समृद्धि र समग्र मुलुकको नेतृत्वका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।
तपाईँले दाङको विकासमा कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुभएको छ ?
मैले दाङको विकासका अनेकन आयामहरू देखेको छु । म २०६४ सालमा पहिलो पटक सांसदका रुपमा निर्वाचित हुँदा पनि भूमिका खेलेको थिएँ । मुख्य त म अर्थमन्त्री हुँदा दाङको सडक निर्माणमा धेरै बजेट विनियोजन भएको छ ।
पहिले दाङ जिल्लामा वार्षिक झण्डै १४/१५ करोड विनियोजन हुँदै आएको थियो । म अर्थमन्त्री हुँदा दाङमा २ देखि ३ अर्ब नै बजेट विनियोजन भयो । यो उल्लेखनीय कुरा हो । म अर्थमन्त्री हुँदा घोराहीदेखि मुर्कुटी हुँदै प्यूठान जोड्ने सडक, दाङ–सुर्खेत सडक, सहिद मार्ग लगायतका ठूला योजनाका सडकमा बजेट विनियोजन भएको छ । दाङ जिल्लाको विकासका लागि धेरै काम गर्नुपर्नेछ । दीर्घकालिन योजना बनाएर लाग्न सकियो भने एसियाको ठूलो उपत्यकाको रुपमा रहेको दाङ जिल्लाको विकासमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।
समृद्ध दाङका आधारहरु के देख्नुभएको छ ? दाङ समृद्ध बनाउनको लागि तपाईहरुसँग के योजना छ ?
दाङ उपत्यका एशियाकै दोस्रो ठूलो उपत्यका हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो उपत्यका हो । भूगोलले हामीलाई निकै साथ दिएको छ । दोस्रो कुरा वातावरणीय हिसाबले निकै राम्रो छ । यो विशुद्ध तराई होइन । यो पूरै पहाड पनि होइन । यहाँको समुदायमा असाध्यै सहमतिपूर्ण तरिकाले अघि बढ्न सक्ने गुण छ । तेस्रो, यहाँबाट पश्चिम नेपालका ६ र ७ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सहरहरू जोडिदैँछन् । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको राम्रो सम्भावना रहेको छ । दाङ लुम्बिनीको वैकल्पिक वासस्थान बन्न सक्छ । लुम्बिनी सीमा क्षेत्रमा छ । त्यहाँ निकै गर्मी हुन्छ । त्यहाँबाट बस्नको लागि पर्यटकहरूलाई यहाँ ल्याउन सकिन्छ । यहाँ पनि केही पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ ।
यही बाटो भएर प्रसिद्ध तिर्थस्थल स्वर्गद्वारी जान सकिन्छ । जलजला, छायाक्षेत्र र कर्णालीको रारालाई दाङसँग जोड्न सकिन्छ । यी सबै क्षेत्रलाई हामीले जोडेर यसलाई केन्द्रविन्दु बनाउनु पर्छ । यसको आधारमा दाङ यस क्षेत्रकै आर्थिक हव बन्न सक्छ । दाङमा प्रशस्त कृषियोग्य जमिन छ । यहाँको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि व्यवसायमा छ । हामीले सिचाइँको उचित व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने कृषि उत्पादन उल्लेख्य बढ्न जान्छ । यी कारणले समृद्ध दाङ सम्भव छ । ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ हुने सम्भावना बढेको छ । मैले त्यसका लागि मेरो तर्फबाट पहल गरिरहेको छु र आगामी दिनमा पनि पहल गर्नेछु ।
तपाईँहरुले गठबन्धनका साथै पार्टी एकता गर्ने भन्नुभएको छ । पार्टी एकताका आधारहरु के–के हुन् ?
विचारधारात्मक रुपमा हामीले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरा गरेका छौँ । हाम्रा विचारमा केही भिन्नता छन् । हामीले बाँकी नेपाली समाजको रुपान्तरणको सम्भावनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्ने विषयमा अलिकति मतभिन्नता छन् । यी कुरा भए पनि हाम्रो साझा लक्ष्य भनेको समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्ने नै हो । यसमा दुई दलबीच खासै धेरै अन्तर छैन । पार्टी एकता अहिले भएको छैन । पार्टी एकता संयोजन समिति मात्रै बनाएका छौँ । हामीहरूबीच रहेका कतिपय वैचारिक, राजनीतिक विषयहरूमा घनिभूत रुपमा छलफल नै पार्टी एकताको निष्कर्षमा पुग्ने आधार हो ।
अब तपाईहरुको कार्यदिशा के हुन्छ ?
माओवादीले लिएको कार्यदिशा अनुसारको क्रान्ति एक ढंगले ग¥यौं । तर, लक्ष्यसम्म पुगेनौं । बीचमा हामीले शान्तिवार्ता ग¥यौं । क्रान्तिका बाँकी काम पूरा गर्न अझै छ । क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्नका निमित्त सम्पूर्ण वामपन्थी, प्रगतिशील शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्छ । अबको लक्ष्य समाजवादी क्रान्ति नै हो । समाजवादी व्यवस्थामा आस्था राख्ने जति शक्तिहरू छन् तिनीहरुलाई एक गठ गराउने र समाजवादी क्रान्ति गर्ने नै हाम्रो मूल लक्ष्य हो । त्यसका लागि हामीले अहिले जे गरिरहेका छौं त्यो भन्दा अघि बढेर समाजवादी क्रान्ति गर्ने नै हाम्रो लक्ष्य हो ।